Mayelana NATHI - ZHEJIANG LEMA ELECTRICS CO., LTD
KW7 Micro Shintsha
KW7N Micro Shintsha
I-KW7F Water Proof Micro Shintsha
KW12 Micro Shintsha
KW12 Okubomvu nokumnyama
I-KW12F Water Proof Micro Shintsha
I-LZ15 switch encane
I-LZ5 Seal Limit switch
I-LZ7 Seal Limit switch
I-LZ8 Mini Limit switch
I-LHL Compact Limit switch
I-LWL General Limit switch
LT Guqula Ishintsha
LF Foot Shintsha
Izisekelo Zamandla ze-IPZ AC
PBS Inkinobho Shintsha
Zhejiang Lema Electric Co., Ltd.itholakala eWenzhou City, eSifundazweni saseZhejiang. Le nkampani yasungulwa ngo-1986.
ULema uzibophezele ku-R & D, ekukhiqizeni nasekuthengiseni ukushintshwa kukagesi kwezimboni. Imikhiqizo eyinhloko yenkampani ifaka ukushintshwa okuncane nokuhamba (umkhawulo)Shintsha, switch inkinobho switch, switch switch, switch switch, overload protector, AC power socket.
Ngemuva kweminyaka ecishe ibe ngu-30 yentuthuko engaguquki, uLema ube ngumkhiqizi omkhulu wochwepheshe bamashintshi amancane eChina. Le nkampani njengamanje ihlanganisa indawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-11,000.
Gxila entuthukweni, ekukhiqizeni nasekuthuthukiseni okuqhubekayo kwemikhiqizo yokushintsha kwekhwalithi ephezulu!
Yamukela izidingo ezikhethekile zamakhasimende ukwenza ngezifiso ukuhlangabezana nezidingo zezicelo ezikhethekile!
Thuthukisa ukusebenza kwezindleko zomkhiqizo futhi ugcine izindleko zamakhasimende!
Ngomkhiqizo wobuchwepheshe neqembu le-R & D, imikhiqizo ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Thuthukisa ubuchwepheshe bokukhiqiza ngobuchwepheshe bese ucwaninga ngokuzimela nokuthuthukisa imishini yokukhiqiza.
Zonke izingxenye zokunyathela nezomjovo zakhiwe ngokuzimela futhi zikhiqizwa, okuqinisekisa ngempumelelo ikhwalithi yomkhiqizo nomjikelezo wokukhiqiza.
Ngokugcinwa kwempahla eluhlaza, izingxenye zokulungiswa kanye nomhlangano ophelile womkhiqizo, ukulawulwa kwekhwalithi yezinyathelo eziningi kuyenziwa, futhi ukuhlolwa kokulethwa komkhiqizo ukuhlolwa okuphelele okungu-100% ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo ehanjisiwe.
Ngelebhu elikhokhelwayo, ukusebenza komkhiqizo kungahlolwa ngokuya ngezidingo ezijwayelekile.
Imikhiqizo eyinhloko ithole i-CCC, i-UL, i-VDE, i-CE nezinye izitifiketi, futhi ihambisana namazinga eRohs.
Guqula Shintsha, Micro Push Inkinobho Micro Shintsha No Nc Ndawonye, I-Push Button Footswitch, Ukushintsha Amandla Shintsha, Guqula i-switch switch, Inkinobho Push Micro Shintshela,